China Universal TV Wall Mount B27 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Zeno
Nokpụrụ NoNJO: B27
Arịọnụ Type: Ugwu Mgbidi
Typedị njem: Ofu
Ihe onwunwe: SPCC
Ikike TV: 42 sentimita asatọ
Opekempe Kwekọrọ n'Ozizi Size: 32 sentimita asatọ
B27, profaịlụ dị ala edozi ugwu igwe, dabara 14 ″ -42 ″ nke anụ ọhịa ahụ, nke mere ka ndị na-azụ ahịa nwee ike ịwụnye TV ha n'ụlọ nke onwe ha n'oge ọsọ ọsọ. Ndị na-azụ ahịa ahụ nwere ike kwụnye LCD eluigwe na ala ha, ngosipụta ngosi n’elu mbadamba mgbidi maka nrụnye ngwa ngwa. Ọzọkwa ndị na-eri nwere ike slide ha na ihuenyo n'ime mgbidi efere kpamkpam dabara ha dị iche iche kehoraizin ihuenyo ikiri n'akuku.
Nke a obere profaịlụ imewe mere gị ultrathin ewepụghị panel TV nnọọ nso mgbidi, naanị 34mm anya si mgbidi. Mfe na ngwa ngwa echichi na disassemble mere ka ezinụlọ gị na-eche ihe adaba na-akwaga gị TV dị iche iche ọnọdụ, na-azọpụta abụọ n'ụzọ atọ wụnye oge karịa ihe ọ bụla ọzọ eluigwe na ala mgbidi mounts.
● Site na ngwaike nke ngwaike, nzukọ pere mpe, yana ịwụnye ngwa ngwa, ị ga-enwe TV gị n’ahụ mgbidi n’abalị iri atọ.
● O nwere ihe anyị na-echeghị n’echiche? Pịa mkpọchi nche usoro na-enye afọ ojuju 'pịa' mgbe gị TV bụ na ntukwasi-obi na mgbidi. Ngwa-ntọhapụ sere ndido urụk TV otú ị nwere ike mfe nweta Gịnị.
Wide mgbidi efere imewe na-arụ ọrụ na ma 16 ″ & 24 ″ osisi studs. A pụkwara itinye ugwu a na mgbidi na mgbidi wụsara.
● Kwekọrọ na ụdị TV niile dị mkpa gụnyere TCL, Samsung, LG, Vizio, na ndị ọzọ. Na Echogear, anyị enwetala ndị ọkachamara TV ugwu iji nyere 7 ụbọchị n’izu aka.
Dezie ya ma chefuo ya. Kachasị na mfe TV arịọnụ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ TV etinyere n’otu ebe na-achọghị igbanwe ma ọ bụ tilt, nke a bụ ugwu dabara adaba maka gị.
Ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ịkwaga, ọ nwere profaịlụ dị ala, ya mere ugwu ahụ bụ isi anaghị ahụ anya na mgbidi. Ndị enyi gị ga-eche na ọ na-eme ka ị na-echekwa ihe mgbe ha bịara, dị ka Wingardium Leviosa. Typedị ugwu a dabarakwa n'ụdị usoro VESA, na-eme ka ndakọrịta ya na ụdị TV dị ka Samsung, Vizio na Sony.
Bịaru nso na mgbidi ahụ nwere otu isi ihe ndọghachi azụ, ọ na-esiri ike ịnweta eriri gị. Na ihu ọma, nke anyị nwere eriri dị mfe iji mepee TV site na ugwu ahụ, iji nweta eriri gị na-enweghị iwetu TV niile, na-azọpụta gị oge. Anyị niile makwaara na oge bụ ego, ego bụ ike, ike bụ Pizza, na pizza bụ ihe ọmụma.
N'ihi na ugwu ahụ adịghị mkpa ịkwaga, ọ bụkwa nhọrọ mmefu ego kachasị mma na kachasị mfe ịrịgo.
Ndị a bụ ụdịdị:
VESA Ndakọrịta: 100 × 100, 200 × 100, 200 × 200,
Mgbanwe Mfe?: Ee
Studs chọrọ: 2
Ndakọrịta Mgbidi: 16 ″ ma ọ bụ 24 ″ na Center Wood Studs & Concrete
Mwube: 100% Ngwongwo dị elu
Zuru ezu nkọwapụta nke B27:
Dabara: 14 ″ -42
Ibu Ibu: 25kg
Ogologo mgbidi: 24mm + 10mm
Igbe dị n'ime: 29.7 * 20 * 2.3cm
PC / katọn 10 PC
Elu igbe: 54 * 31.5 * 22cm
Osote: Kemeghi LCD TV N'uko Mount 32-70 inch Flat Screen TVs
nkuku tv mgbidi ugwu
Edoziri Ugwu Mgbidi
Tilting Tv Mgbidi Ugwu
Ugwu Universal Tv Ugwu